युएईमा जो तिन महिनापछि कोमाबाट फर्किइन ! डाक्टर आश्चर्यचकित - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
युएईमा जो तिन महिनापछि कोमाबाट फर्किइन ! डाक्टर आश्चर्यचकित
Posted by Milap Subedi | १२ बैशाख २०७४, मंगलवार १३:०७ |
१२ बैशाख,काठमाडौँ । युएईको अस्टर अस्पताल मंखुलमा ८० दिन कोमामा बिताएपछि एक नेपाली महिलाको होस् आएको छ । खोटाङको बाम्राङकी ३१ वर्षे देवी लामा श्रेष्ठ लामो समयपछि होस्मा आएकी हुन।
उपचारमा संलग्न डाक्टरले देवीको स्वास्थ्यमा आएको सुधारलाई आश्चर्यजनक सुधारको रुपमा लिएका छन् । देवीको अप्रिल ९ को बिहानै होस् आयो । होस् आउँदा उनको छेउमा श्रीमान लोकेन्द्र थिए । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सेर्वाज विच्छुले यो आश्चर्य जनक सुधार भएको बताए ।
‘अस्पतालमा ल्याउँदा उनी बाँच्ने कमै आश थियो’ डक्टर बिच्छुले भने, – ‘त्यहि पनि हामीले भर्ना गरेका थियौं । नभन्दै श्रीमानको लगन र अठोटका कारण केस सफल भयो ।’
श्रीमानले उनको ज्यान गए आफूपनि सँगै प्राण त्याग्ने बताएको अस्पतालले जनाएको गल्फ न्युजमा समाचार छ । यो अवधिमा श्रीमान लोकन्द्र पनि सँगै अस्पतालमा बसे ।
देवी र लोकेन्द्रसँगै चेन कफिसपमा काम गर्नुहुन्थ्यो । कामकै शिलशिलामा भेट भएका लोकेन्द्र र देवीले गएको जुन महिनामा विवाह गरेका थिए ।
गएको जनवरीमा काम गरिरहेको बेला देवी अचानक विरामी भइन । उनलाई उच्च ज्वरो र वान्ता भयो । बिरामी हुँदा देवी ६ महिनाको गर्भवती थिइन ।
देवीलाई श्रीमानले अस्पताल पुर्‍याए । अस्पताल पुर्‍याएको तीन दिन पछि उनलाई विरामले झन साह्रो पार्‍यो । त्यसपछि देवीलाई आइसियुमा भर्ना गरियो ।
उपचारमा संलग्न डाक्टरका अनुसार उनलाई स्वासप्रस्वास सम्बन्धी समस्या थियो । गर्ववतीको अवस्थामा यो कसै कसैलाई हुन सक्छ । उनको फोक्सो सुनिएर पानी भरिएको थियो । मुटु पनि कमजोर भएको थियो । चाल पनि स्थिर थिएन । मृगौला र कलेजो पनि संक्रमित थियो । उनी जिवीत रहने संभावना कम थियो ।
यो सबै अवस्थाको उपचार गर्न देवीलाई कोमामा पठाउन र अक्सीजन दिन पनि जुरुरी भयो । धेरै वटा अंगले एक साथ काम गर्न छाडेपछि देवीको अप्रेसन गरियो तर बच्चा बचाउन सकिएन ।
सामान्यत यस्ता विरामीलाई १४ दिन मात्रै भ्यान्टिलेटरमा राखिन्थ्यो । तर देविलाई तीन महिना बढि राखियो ।
गएको अप्रील ९ देखि उनको स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ । आइसियुबाट सामान्य रुममा लगिएको छ । मांसपेशी बलियो पार्नको लागि फिजियो थेरापी गरिरहेको छ । यो सकिएपछि देवी नेपाल फर्कनेछिन।
गएको सय दिनको उनलाई केहि याद छैन । मात्र एउटा सपना याद छ । रेलमा यात्रा गरिरहेको कुरा मात्रै याद भएको देवीले बताईन ।
देवीले विदेश जानु पहिले काठमाडौंमा बोर्डिङ स्कुल सञ्चालन गरेकी थिइन । तर अहिले बन्द गरिएको छ । आफू पुरै ठिक भएपछि देवीले खोटाङ फर्किएर अंग्रेजी भाषाको निजि विद्यालय सञ्चालन गर्ने लक्ष रहेको उनको भनाई थियो ।
खोटाङमा राम्रो अंग्रेजि भाषाको विद्यालय नभएकाले प्लेग्रुप देखि १२ कक्षा सम्मको अंग्रेजि भाषाको विद्यालय खोल्ने योजना रहेको बताईन ।
तर उनको उपचारमा संलग्न डक्टर प्रभुले देवीलाई पूर्णरुपमा स्वस्थ हुन अझै ६ महिना लाग्ने बताएका छन् ।
Previousदोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लाङटाङ म्याराथनमा होमलाल श्रेष्ठ प्रथम
Nextमेल्बर्नमा सत्य-स्वरुप लाइभ कन्सर्ट हुँदै
भारतीय स्वतन्त्र संग्रामकी अग्रणी वेगम हजरतको स्मृति दिवस आज, राजदूत पुरीद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण
२५ चैत्र २०७३, शुक्रबार १३:५६
‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार नेशनललाई सम्वन्धन’ : त्रिवि
९ भाद्र २०७४, शुक्रबार १७:१७
चुनावविरोधी गतिविधिमा संलग्न ३ सय ५३ जना पक्राउ
६ मंसिर २०७४, बुधबार १७:५२